Hordhac | alirshaad.com
« Erey bixinta sagaalka ah
Ha is Cajabin wadaadow »
Mahad aan la soo koobi kareyn Allaah bay u sugnaatay, nagu galladaystay garashada iyo caqliga lagu kala saarayo wanaagga iyo xumaanta, nagu galladaystay islaamka noogana dhigay Diin dhamaystiran oo nolosha aadanaha oo dhan maareysa, maareysa nolosha adduunka sida uu Allaah ka doonayo, sida uusan inala doonaynin iyo sida uu xaalku noqonayo godka iyo geeri ka dib.
Allaah waxa uu inoo soo diray kitaab (qormo) dhameystiran layskumana khilaafsana in kitaabkaa qur’aanka ah yahay kii Allaah uu Nabiga inoogu soo dhiibay (N.N.K.H). Kitaabkaas oo ku qoran afka carabiga.
﴿قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾
Hasa yeeshee marka cilmi lagu baranayo luuqad aan taada ahayn waxaan laga maarmayn inaad samaysid erey bixin iyo in ereyadaas la qeexo,la cadeeyo si loo fahmo ujeedadooda.haddaba waa halkaas meesha aan laysku fahmeyn ama laysku fahmi la’yahay, iyadoo Islaamkii la wada sheeganayo haddana aan laysku fahmeyn sidii loogu wada dhaqmi lahaa.
Waxaa jira sagaal erey oo haddii aan loo fahmin sidii ay u fahamsaneyd carabtii xiligii Nabiga joogtay aanay suuro gal ahayn in loo fahmo hadafka dhabta ah ee dacwada (baaqa) Islaamka ama la garto waxa uu yahay dhab ahaan.
Waxaan halkaan si kooban ugu caddeynaynaa ereyadaas si qofkii Xaq doon ah uu uga faa’ideysto. Hadafka (baaqa) Islaamka marka qofka loogu yeerayo Towxiidka (التوحيد) iyo sida qur’aanka u soo dhigay ereyadaas,kuwaasoo kala ah: